Donghuan စက်ရုံနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း သတိပေးချက်
Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castins Co., Ltd. ကို Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Technology Co., Ltd. သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုဒဏ်ကြောင့် မူလစက်ရုံကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးပြုရန်အတွက် အစိုးရမှ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် စက်ရုံလိပ်စာ...
ပျော့ပြောင်း၍မရသော သွန်းလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်နှင့် ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်း
ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု- အင်္ဂါရပ်များ မလောင်းနိုင်ပါ- သွန်းပုံသဏ္ဍာန် မပြည့်စုံပါ၊ အစွန်းများနှင့် ထောင့်များသည် ပါးလွှာသော နံရံအစိတ်အပိုင်းများတွင် အများအားဖြင့် မြင်တွေ့ရသည့် အဝိုင်းများဖြစ်သည်။အကြောင်းရင်းများ- 1. သံရည်အောက်ဆီဂျင်သည် ပြင်းထန်သည်၊ ကာဗွန်နှင့် ဆီလီကွန်ပါဝင်မှုနည်းသည်၊ ဆာလဖာပါဝင်မှုမြင့်မားသည်၊2. လောင်းခြင်းအပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ လောင်းခြင်းအရှိန်နှေးခြင်း...
Claw coupling များကို စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လေနှင့်ရေအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။အချိတ်အဆက်၏ နှစ်ခြမ်းစလုံးသည် အတိအကျတူညီသည် - Coupler နှင့် Adapter အကြား ကွဲပြားမှုမရှိပါ။၎င်းတို့တွင် ခြေသည်းများ (ခြေသည်းများ) နှစ်ခုစီပါရှိပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ဝက်၏ ဆက်စပ်အထစ်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့လုပ်နိုင်တာက...
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် Shijiazhuang dong huan malleable iron castings co., ltd သည် ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံထည်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ကုန်ကြမ်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုပ်အချို့ရှိသည်။Cast ၏ C၊ Si၊ CE နှင့် Mg တန်ဖိုးများသည် t ၏ အဓိကကျသောအတိုင်းအတာများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည် ။
Casting coating သည် မှို သို့မဟုတ် အူတိုင်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော အရန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သွန်းလုပ်ခြင်း၏ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 3000 ကျော်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရှေးဦးသွန်းလုပ်သည့် လက်သမားဆရာများသည် ပုံသွန်းအပေါ်ယံပိုင်းကို ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးကာ အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်...
Shijiazhuang Donghuan ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံသွန်းလုပ်ခြင်း coated sand casting လုပ်ငန်းစဉ်
ဒီနေ့ မင်းကို Donghuan Malleable Iron Casting Co., Ltd ကို ခေါ်သွားမယ်။ coated sand ရဲ့ သွန်းလုပ်နည်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။I. coated sand ၏ အသိပညာနှင့် နားလည်မှု 1. coated sand ၏ အင်္ဂါရပ်များ သင့်လျော်သော ခိုင်ခံ့မှု စွမ်းဆောင်ရည် ရှိပါသည်။အရည်ပျော်မှုကောင်း၍ ပြင်ဆင်ထားသော သဲမှိုများနှင့် သဲအူများပါရှိသည်...
မကြာသေးမီက တရုတ်အစိုးရ၏ "စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခု" မူဝါဒသည် အချို့သောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အမှာစာများပေးပို့မှု နှောင့်နှေးနေရမည်ကို သင်သတိပြုမိပေမည်။ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ...
Sandblast အချိတ်အဆက်များကို မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ပစ္စည်း : သံထည်။ရော်ဘာဆေးစက်၊ သံမဏိဘေးကင်းရေးကလစ်နှင့် ဝက်အူများ တပ်ဆင်ထားသည်။အသုံးပြုပုံ- အတွင်းအချင်း 32 မီလီမီတာရှိသော ပွန်းပဲ့မှုတ်ပိုက်များအတွက်။Sandblast hose couplings များသည် sandblast hose applications များအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော အမြန်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် nozzle-threaded hose coupling တစ်ခုဖြစ်သည်။အဲ...
မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ခိုင်မာမှုအားကောင်းခြင်း။
1. ပစ္စည်း- Malleable Cast သံ။ASTM A 197၊ASTM A47၊ DIN EN 1562 2. Dimensions- DIN EN 10242 3. Threads- IS07-1,DIN 2999 4. ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား- 1/8''—6'' 5. မျက်နှာပြင်- ရေနွေးပူပူဖြင့် သွပ်ရည်စိမ်ထားသော၊ အနက်ရောင် ၊ zinc-plated 6. Malleable fittings များမှာ တံတောင်ဆစ်များ၊
ယခုအခါ စက်ရုံများ ပိုများလာသော်လည်း ဝယ်ယူသူအတွက် ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိုက်တန်သော စက်ရုံများမှာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ ကာရိုက်တာကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ ဆိုတာ ဖောက်သည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာပါ။Casting Factory ရွေးချယ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် o...
နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ခံအားပေးသော စိမ်းလန်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးသော မြို့တော် ထူထောင်ရေး အတွက် Shijiazhuang Donghuan malleable iron Casts co., ltd မှ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည်လည်း စက်ရုံ၏ သန့်ရှင်းရေးကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ဤသန့်ရှင်းရေးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သည်...
ကျောက်တူးခြင်းများသည် ကျောက်တူးခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အသုံးပြုသည့် စက်မှုလယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ရော့ခ်လေ့ကျင့်မှုတွင် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုက်နှင့် ပိုက်ကြားတွင် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် double bolt clamp ကိုအသုံးပြုပြီး air hose couplings များသည် tube pipe နှင့် rubber hose ကို ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ခေါက်လို့ရတဲ့ သံခြေအိတ်...
American Standard Fittings များ, လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, Hinged Pipe Clamp, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, Hose With Coupling,
Shijiazhuang Donghuan Malleable သံသွန်း...
ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သွန်းလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်နှင့်...
ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခု- မလောင်းနိုင်သော အင်္ဂါရပ်များ- c...
ခြေသည်းကြိုးများကို လေ၀င်လေထွက်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်...